Xiisad ka taagan Toogasho ka dhacay Baladxaawo iyo Masuuliyiin loo Xirxirey dilkaas | Somalisan.com
Home Afsomali Xiisad ka taagan Toogasho ka dhacay Baladxaawo iyo Masuuliyiin loo Xirxirey...
Xiisad ka taagan Toogasho ka dhacay Baladxaawo iyo Masuuliyiin loo Xirxirey dilkaas
Weli waxaa degmada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo ka taagan xiisadii ka dhalatay Afar qof oo habeen ka hor lagu dilay degmadaas kuwaas oo lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab islamarkaana ay ka dambeeyeen falal amnidaro oo horay uga dhacay degmadaas.
Intaasi kadib waxaa Balad xaawo gaaray Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Jubbaland kuwaas oo aad uga xumaaday dilka Afarta dhalinyarada ah.
Masuuliyinta Maamulka Jubbaland ayaa Xabsiga dhigay Gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Madaxa Arimaha Bulshada degmadaas iyo taliyaha Nabad-Sugida Gobolka Gedo,kuwaas oo ka dambeeyay amarka lagu dilay ragga Shabaabka lagu eedeeyay.
Masuuliyiintaan oo xalay ilaa Maanta ku xirnaa Gudaha degmada Balad Xaawo ayaa Wararka Caawa nasoo gaaraya waxa ay sheegayaan in loo wareejiyay xabsi ku yaalla degmada dooloow,sida ay Radio Dalsan u xaqiijiyeen Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Jubbaland.
Ehelada Dhalinyaradii la dilay ayaa waxa ay sheegeen in sixaqdaro ah loo dilay islamarkaana ay doonayaan in Cadaalada lamarsiiyo dadkii ka dambeeyay dilkaas,inkastoo Madaxda jubbaland ay sheegayaan in raggaas ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
Previous articleShir Kismaayo lagu qabtay oo fashil ku dhamaaday iyo Maamulo diiday
Next articleFanaanada Nasteexo Indho oo Muqdisho lagu xirey aqri sababta
(Akhriso) Warsaxaafadeed Jubbaland oo DF ku eedeysay iney arrimo halis ah ka wado gobolka...
Xildhibaan Canab guure oo ilaaldeedii ku weysay isku sawirida calanka Somalia
Somalisan News - December 20, 2020
Somalisan News - October 8, 2019